WINDOWS 10 YAKHA I-18362.113 ITHOLAKALA KWINDANDATHO YOKUBUKA KUQALA YOKUKHISHWA KWE-19H1 - I-WINDOWS 10
Windows 10 Yakha i-18362.113 itholakala kwindandatho yokubuka kuqala yokukhishwa kwe-19h1
Nge Windows 10 Yakha i-18362 inkampani iqoqe i-OS ukuze ikhishwe emphakathini ezinyangeni ezizayo. Njengamanje, iqembu labathuthukisi beMicrosoft ligxile ngokuphelele ekulungisweni kweziphazamiso nasekuzinzeni ngaphambi kokukhishwa komphakathi. Ungafunda Okuzayo Windows 10 Izici ze-1903 kusuka lapha.
Okuqukethwe umbukiso 1 Windows 10 yakha i-18362 ezimbili Windows 10 Usuku lokukhishwa kwe-19h1
Ukuvuselelwa: 21/05/2019: Windows 10 May 2019 Ukuvuselelwa kukhishwe
Windows 10 Izici ze-1903
Isixhumanisi sokulanda seWindows 10 1903,
Windows 10 Umhlahlandlela wokuxazulula inkinga we-1903
Ungakwenza kanjani Ukubuyiselwa emuva Windows 10 1903
04/14/2019: IMicrosoft ikhiphe isibuyekezo sesibili sekhwalithi I-KB4497936 for Windows 10 inguqulo 1903 leyo bumps build number Windows 10 yakha i-18362.113 futhi ulethe izilungiso zokuba sengozini kwezokuphepha, umhloli wamazwe we-inthanethi futhi enze kahle kakhulu.
'Lesi sibuyekezo sifaka izibuyekezo eziza njengengxenye yomjikelezo ojwayelekile wokukhishwa nyangazonke,' inothi yokusekelwa kweMicrosoft kuchaza .
Izinguquko ezibalulekile zifaka:
Ukuvikelwa ngokumelene ne-subclass entsha yobungozi bokusebenzisa ohlangothini besiteshi, obaziwa njengeMicroarchitectural Data Sampling, yezinguqulo ezingama-64-Bit (x64) zeWindows ( I-CVE-2018-11091 , I-CVE-2018-12126 , I-CVE-2018-12127 , I-CVE-2018-12130 ).
Ikhuluma ngendaba eyehlisa ukusebenza kwe-Internet Explorer uma usebenzisa amaphrofayili wokuzulazula noma ungasebenzisi uhlu lokuhambisana lweMicrosoft.
Ikhuluma ngendaba engadala ukuthi umbhalo, ukwakheka, noma usayizi weseli ube mncane noma ubanzi kunokulindelekile ku-Microsoft Excel lapho usebenzisa amafonti we-MS UI Gothic noma we-MS PGothic.
04/26/2019: IMicrosoft ikhiphe Ukuvuselelwa Okuqoqekayo I-KB4497093 ye-Windows 10 19h1 Buka kuqala indandatho eshaya ku amawindi 10 akha i-18362.86 futhi ilungisa izimbungulu eziningana zifaka:
amawindi 10 wokuthuthukisa iphutha 0x80070020
Ama-Windows Insider asendandeni esheshayo angakwazanga ukubuyekeza esakhiweni sakamuva esingu-20H1 kusuka ku-Build 18362.86.
ukuthuthukiswa kwabasebenzisi baseJapan noma ukusebenzisa i-OS ngesiJapane kufaka phakathi ukulungiswa kwe-Japanese IME nokulungiswa kwezinkinga zosuku nesikhathi.
kulungiswe inkinga lapho i-UWP I-VPN izinhlelo zokusebenza ze-plugin kungenzeka zingakwazi ukuthumela kahle amaphakethe ngomhubhe osungulwe we-VPN kunethiwekhi ye-IPv6 kuphela.
Futhi, inkinga ebangela ukubuyekeza ku-Build 18362 yehluleke ukufaka ngephutha le-0x80242016, manje selilungisiwe.
04/09/2019: Inkampani ikhiphe isibuyekezo esisha sokuqoqwa I-KB4495666 yenguqulo 1903 eshaya ku amawindi 10 akha i-18362.53 . Lokhu kubuyekezwa kufaka nezibuyekezo zokuphepha eziza njengengxenye yomjikelezo wokukhishwa wePatch ngoLwesibili ojwayelekile.
04/08/2019: IMicrosoft ikhiphe Windows 10 Meyi 2019 Buyekeza inguqulo 1903 kuya ku-Release Preview ring Insiders.
'Isibuyekezo sangoMeyi 2019 sizohlala endandeni yokubuka ukukhishwa isikhathi esengeziwe ukuze sinikezwe isikhathi esengeziwe nezimpawu zokuthola noma yiziphi izinkinga ngaphambi kokusatshalaliswa kabanzi,'
04/04/2019: IMicrosoft imemezele okuzayo Windows 10 isibuyekezo (isibonisi sokuqala se-19H1) sizobizwa nge- “Windows 10 May 2019 Update”.
IMicrosoft ikhiphe okusha Windows 10 Ukubuka kuqala kwangaphakathi 18362.1 (19h1_release) Kutholakalela abangaphakathi bezindandatho ezisheshayo. Lokhu okunye ukubuyekeza okuncane Gxila ekulungisweni kweziphazamisi futhi ucwenge ukusebenza ngaphambi kokwethulwa komphakathi. Ngokuya nge-Microsoft insider blog, Nge-Latest Windows 10 yakha i-183 62 ilungisa inkinga Xhuma ukuqhuma kohlelo lokusebenza ekwethulweni nasezibuyekezo zohlelo lokusebenza lweMicrosoft Store ezingazifaki ngokuzenzakalela.
Njengakho konke okunye ukwakhiwa kwangaphambilini, kunezinkinga ezaziwayo futhi, ezibandakanya ukuphahlazeka okufanayo okubulalayo okungadalwa isoftware yokuphamba emidlalweni ethile. Amanye amakhadi omsindo we-Creative X-Fi namanje awasebenzi kahle, Abanye abafundi bekhadi le-Realtek SD abasebenzi kahle futhi iMicrosoft ithi isebenza neCreative ukuxazulula inkinga.
Uma uyi-Windows Insider eringini elisheshayo, idivayisi yakho ilanda nge-othomathikhi bese iyifaka Windows 10 yakha i-18362 ngewindows update. Noma ungabuyekeza mathupha ku-Insider Preview Build 18362 ngokuya ku-Amasethingi -> Ukuvuselelwa Nokuvikeleka -> Ukuvuselelwa kweWindows bese uhlola izibuyekezo ezintsha.
Windows 10 yakha i-18362
Yebo, njengamanje sisezigabeni zokugcina iMicrosoft igxile ngokuphelele ekulungisweni kweziphazamiso ngaphambi Windows 10 1903 RTM build. azikho izici ezintsha noma ushintsho olubalulekile, Lapha Olunye ushintsho oluphawulekayo nokulungiswa kwamaphutha kufaka phakathi windows 10 18362
Kulungiswe inkinga okuholele ekutheni uhlelo lokusebenza lwe-Connect luphazamiseke ekuqalisweni kwabanye abangaphakathi.
Kulungiswe inkinga ngezinhlelo zokusebenza ze-Microsoft Store ezingazifaki ngokuzenzakalela.
Ukwethulwa kwamageyimu asebenzisa i-anti-cheat software kungadala i-bugcheck (GSOD).
Amakhadi womsindo we-Creative X-Fi awasebenzi kahle. IMicrosoft isebenzisana neCreative ukuxazulula le nkinga.
Abanye abafundi bekhadi le-Realtek SD abasebenzi kahle. IMicrosoft iphenya lolu daba.
UMicrosoftifaka kuhlu isethi ephelele ye-ukuthuthuka, fixes, nezinkinga ezaziwayo ze Windows 10 InsiderHlola kuqalayakha i-18362 ku- I-Windows Blog .
Windows 10 Usuku lokukhishwa kwe-19h1
IMicrosoft ayikaqinisekisi noma yiluphi usuku lokukhishwa kwesibuyekezo se-19H1. Kodwa-ke, inkampani ivame ukukhipha izibuyekezo zasentwasahlobo ngo-Ephreli. Silindele ukuthi iWindows 10 19H1 aka Version 1903 izofinyelela isimo se-RTM ngesinye isikhathi ngoMashi 2019. Ukukhishwa esidlangalaleni kwe- I-Windows 10 Ukuvuselelwa kwe-19H1 kungalindelwa ngo-Ephreli 2019 njengoba Windows 10 Ephreli 2019 Buyekeza inguqulo 1903.
Izici ezintsha ezethuliwe Windows 10 Ukuvuselelwa kuka-Ephreli 2019 (ukubuka kuqala kwe-19H1)
Kuxazululwe: Iphutha le-BSOD lesitaki se-driver ku-windows 10 inguqulo 1803
Izindlela ezi-3 zokuqalisa ku-Safe Mode ku Windows 10 1809
Kuxazululwe: IWindows Ayikwazi Ukuxhuma Kwiphrinta, Ukufinyelela kuyenqatshwa
ngikubuyisa kanjani emuva windows 10 ukubuyekeza
kungani uhlangothi lwami lweMicrosoft lungasebenzi
qala isixazululi nkinga semenyu samawindows 10 wokulanda mahhala
windows 10 buyekeza umsizi unamathele kuma-99
amawindi 10 awakwazi ukuthola isikrini sokwamukela esidlule
windows 10 lolu hlelo lokusebenza luvimbela ukuvala shaqa
iwindows update Assistant iqhubeka nokufaka kabusha